Vikin'i Hoby Rasolofoarimasy
"Voambolanao no lasa mamiko
Mozikanao no tian’ny sofiko,
Asa! na noho ianao andrianiko
Fa ny momba anao toa lasa nofiko"
Inoana fa hanana ny toerany eo amin'ny tantaran'ny literatiora malagasy izany andinin-tononkalo izany. Ahatsiarovana ny diam-penin-dry Dox sy Ny Avana ny lentan'ny fahamatorany. 78 taona katroka anefa no elanelan-taonan'i Hoby Rasolofoarimasy sy i Dox. Voafolak'i Hoby ny fikajiana ny hanitry ny teo aloha; voafehiny koa anefa ny fivoaran'ny literatiora ankehitriny ka nahavitany amboaran-tononkalo hatolotra amin'ny fomba ofisialy ny 12 desambra ho avy izao. "Vikina" no lohateniny, teny tokana mahalaza hafatra mafonja ary mamintina ny boky. Isaorantsika i Hoby tonga mamangy ny Pôetawebs sy ny mpiserany ary mamaly ireo fanontanian'i Toetra Ràja.
Miarahaba anao Hoby nitondra voandalana. Nanaitra avy hatrany ilay fitovian'ny daty nahaterahanao sy ny an'i Dox!
Faly miarahaba anao Toetra Ràja, endrika feno tsiky ihany koa no iarahabako ireo rehetra miara-misalahy eto amin’ny Pôetawebs amin’ny fanandratana avo ny literatiora malagasy.
Eny tokoa, ny 13 janoary 1991 no nahita masoandro voalohany tao Andranomadio Antsirabe i Hoby Rasolofoarimasy. Nanamarika ahy ihany koa tany an-tsekoly rehefa nianatra ny momba an’i Dox ny fitoviana tsingerin-taona aminy. Azo lazaina fa anisany nanosika ahy hitia ny asa sorany sy ny literatiora izany. Teo amin’ny faha 10 taonako aho no nanomboka nanoratra tononkalo. Tsapa ho nihanirindra kokoa anefa ny asa soratro teo amin’ny faha 13 taonako satria taona izay nianarako nikabary ihany koa io. Tena tia ny taranja sy ny teny malagasy aho ary nandalina izany teny amin’ny anjerimanontolo. Nampiarahiko tamin’ny fianarana mikasika ny fifandraisana sy ny fanelanelanana izany. Ankehitriny aho dia mpianatra mpikaroka momba ny Haiolona na "Anthropologie". Mankafy zavakanto, hira sy mozika ary zava-maneno aho ary raha maniry hitsidika ahy ianareo dia ao Ivato Seranana no misy ny toeram-ponenako.
Antsirabe no tanàna niavianao. Mifanerasera amin'ny any amin'iny faritra iny ve ianao?
Mampiaiky ahy mihitsy fa maro mpanoratra manan-talenta i Antsirabe ary mampirehareha izany. Hatreto aloha, mifandray amin’ny ampahany amin’izy ireo aho ary mbola maniry hifandray sy hahafantatra bebe kokoa azy rehetra mihitsy. Tsy ireo ihany fa ny rehetra manerana an’i Madagasikara sy malagasy maneran-tany.
Azo lazaina fa namolavola anao ho tia tononkalo ve ny sekoly nianaranao tany?
Tena namolavola tokoa satria tamin’ny sekolim-panjakana hatrany aho no nianatra tany Antsirabe, toerana tony ravahan’ny zava-maitso milenodenoka, sasasasan-driandrano re avy lavitra no nandrotsirotsy tao an-dakilasy. Ny mpampianatray tamin’izany rahateo dia olona tena tia tononkalo. Tsaroako tsara fa rehefa misy tsianjery na tononkalo na tantara na lahatsoratra asain’ny mpampianatra vakina dia izaho hatrany matetika no voasafidy naneho ohatra ho an’ny ankizy rehetra.
Mahaliana ny maro ireo lalana efa nodiavinao teo amin'ny kanto!
Tsy dia mbola tena hitan’ny maro niseho sehatra goavana loatra aho raha ny tononkalo no asian-teny, ankoatra ny fankalazana ny fetin’ny reny na ray sy ny mitovitovy amin’izany. Mikabary am-panambadiana no tena ahitan’ny maro ahy matetika, manentana sy mandrindra lanonana na fivoriana ihany koa ary efa mpiantsa tononkalo tamina onjam-peo iray.
Raha ny boky indray no asian-teny dia efa nisy tononkalo iray mitondra ny lohateny hoe : "Raha manta vary indray mandeha" nivoaka tamin’ny laharana 000 an’ny revio Tsara Soratra. Mbola tena santatra amin’ny famoahako boky ity VIKINA ity.
Tafiditra tao amin'ny Fikambanan'ny Mpikabary Malagasy (FI.MPI.MA) anefa ianao ary mihevitra ny hirotsaka ao amin'ny fikambanana sy mpanoratra koa. Misy antony manokana ve ilay hoe fikambanana Mpikabary aloha?
Fikambananana mifameno tanteraka ireo fa ny antony manokana araka ny efa nolazaiko teo ambony dia mbola sokajy taninketsa aho dia efa tao amin’ny FI.MPI.MA. Tsy nitsahatra aho fa niezaka nikaroka sy nandalina hatrany ary efa hamoaka voka-pikarohana tsy ho ela ihany koa mikasika ny vehivavy malagasy mikabary.
Efa tena ela aho no naniry hiditra fikambanana mpanoratra saingy noho ny asa sy ny fianarana izay nifanindran-dalana hatrany ho ahy dia nisy ny tsy fahafahana. Ankehitriny aho resy lahatra fa tsy maintsy miezaka mandrindra ny fotoanako ary mila miditra fikambanana hahafahako mivelatra kokoa eo amin'ny sehatry ny fanoratana.
Hiresaka ny bokinao amin'izay isika. Inona no maha samy hafa ny andraikitry ny RanjaSoa Publishing sy ny Torio Créatives teo amin'ny fanatontosana ny boky?
Mpanoratra iray izay tsy iza fa i Johary Ravaloson, anaovako kopa-tanana manokana eto, no nahafantarako an’i Ranjasoa Publishing. Izy no nanoro ahy an’i Soamiely Andriamananjara izay nanosika ahy hamorona hatrany ary hanambatra ireo asa soratro ho lasa boky. Izy ihany koa no nampiely ny ampahan’ny sangan’asako tao amin’ny tranonkala soratra.org.
Ny Torio Creatives indray izay tanora avokoa no mandrafitra azy dia efa namako hatrizay ary mandrisika ahy hiroso lalindalina kokoa hatrany hanatanteraka ny nofinofiko.
Mifameno tanteraka ny asan’izy ireo fa ny Torio Creatives no miandraikitra ny haingo sy ny sary fanehoana ny boky (design) raha toa ka ny tontolon’ny soratra sy ny fanontana ary ny fanapariahana kokoa ny an’ny Ranjasoa Publishing.
Inona indray no anton'ny nisafidiananao an'i Hanitr'Ony hiantsoroka ny Sasin-teny?
Tao anatin’ny asa soratra no nahalalako an’i Hanitr’Ony, efa mpankafy sy mpanaraka ny sangan’asany hatramin’izay aho. Nampitombo ny fitiavako azy ny nahafantarako fa zafikelin’i Dox izy. Mambabo ahy ny voambolana ampiasainy, ny fitandroany ny teny malagasy na dia tsy eto an-toerana aza izy. Tena mahafinaritra ahy ary ataoko fitaratra ny vehivavy sahy sy tia mandray andraikitra. Antony nisafidianako azy izy amin’ny maha izy azy ary mbola ankasitrahako azy etoana ny nanekeny nanao ny sasin-tenin’i VIKINA.
Raha tombanana vetivety ny sary amin'ny fonon'ny boky dia ahitana vehivavy mitsambikina. Nahoana aloha no vehivavy no niantefan'ny safidy?
Mifono hevitra maromaro tokoa Toetra Ràja ilay sary amin’ny fonon’ny boky io. Antony voalohany, vehivavy no niantefan’ny safidy satria vehivavy ny mpanoratra azy, vehivavy no nanao ny sasin-teny ary mbola vehivavy ihany koa no hiahy ny famoahana ofisialy ny boky.
Raha zohina indray dia miendrika saritanin'i Madagasikara ilay tongotra ankavanana mampiainga ilay olona. Tena izany tokoa ve?
Marina tokoa izay voalazanao Toetra Ràja saingy aleo angamba ny mpisera rehetra no hanakatra ny hevitra tiana hampitaina mikasika io sary io satria fantatro fa olona tia mandalina avokoa ny mpitsidika eto.
Tsikaritra fa ny ampahany maro amin'ny tononkalo hita ao amin'ny "Vikina" dia nosoratana tamin'ny 2018. Nisy "fifohazam-panahy" mahery vaika ve tamin'ity taona ity?
Mahatsikaiky tokoa, na dia efa nofinofy hatry ny ela aza ny hamoaka boky, nisy fotoana toa niato kely ny famoronana. Nahatalanjona fa tamin’ity taona 2018 ity dia toa nipololotra tsy azo notazonina ny aingam-panahy. Maro dia maro ihany koa ny tranga sy ny seho nisy izay nanohina ahy manokana. Izany angamba no anton’ilay "fifohazam-panahy" mahery vaika araka ny nolazainao.
Anisan'ny mpampiely tononkalo ao amin'ny Facebook ve ianao? Ahoana ny fomba fiarovana ny sanganasanao?
Nampiely ny asa soratro tao amin’ny Facebook hatrany tokoa aho hatrizay saingy nisy fotoana, nisy olona sahy nisoloky ny asa soratro tao anatina vondrona iray izay. Nanomboka teo dia nandray fepetra ny amin’ny hiarovako ny asa soratro aho. Tsy dia mampiely asa soratra loatra intsony aho raha tsy efa nivoaka tanaty boky izany.
Mbola tena sarotra anefa ny miaro ny sangan’asa eto Madagasikara saingy na dia misy aza ny sahy misandoka ny asa soratry ny hafa, amiko, mipetraka eny foana ny rangotry ny tena tompony. Fantatra foana ny tena mpamorona ary tsy lany aingam-panahy izany mihitsy, fa toy ny loharano tsy manam-paharitana izany ho azy.
Manam-pahaizana ambony momba ny haiteny no nanitsy ireo mety ho fahadisoan-tsipelina tao amin'ny "Vikina". Fantatrao ve raha maro ireo olon'ny Anjerimanontolo manampy ny vao misondrotra?
Tena misy ny manampy rehefa tena maneho fahavononana sy sahy mametraka ny maha izy azy ny mpanoratra vao misondrotra. Misy ihany koa anefa no manidy varavarana tsotra izao fotsiny. Raha mila ny fanampian’izy ireo dia mila ianao no manatona ary maneho fa sahy sy mahefa.
Midadasika ny lohahevitra ijoroan'ny tononkalo ao amin'ny "Vikina" toy ny fitiavan-tanindrazana, tsy rariny sy tsy hitsiny, fitiavan'olon-droa, ankohonana sns. Azonao fenoina ve ny lisitra?
Manampy ireo voalazanao ireo Toetra Ràja, ny fitaterako bebe kokoa ny fiainan’ny velona, ny trangam-piaraha-monina izay mibaribary tsy takona afenina.
Raha tombanana malaky dia tsy ahitana teny famaranana ny boky. Ny tononkalo farany "Hody ventiny" anefa dia tsapa ho mahafintina azy. Tena izany ve?
Tena izany mihitsy; voalazanao. Tsy manana hanampiana intsony aho.
"Na dia tsy fantatro ny ampitso
Tsy voavinako ny ho avy
Na dia an-kifonofono
Mbola toa manalasala
Ny kiry inoako tsy ho ela
rano rehetra nantsakaiko
Hiaka-tsehatra i Hoby Rasolofoarimasy. Telo herinandro sisa, efa milamindamina ve?
Tena ao anatin'ny fanomanana tanteraka mihitsy amin’izao, eny efa saiky milamindamina avokoa ny zavatra rehetra fa ny fanatanterahana azy no sisa.
Misy manampy ve ianao amin'ny fikarakarana?
Ankoatra ny fiahian-dRtoa Johasy Eléonore, Minisitry ny Kolontsaina sy Fampiroboroboana ny asa Tanana ary Fiarovana ny Vakoka, sy Rtoa Michèle Rakotoson izay nanome tso-drano sy nanohana ara-kevitra, dia eo ihany koa ny Alliance Française Andavamamba, izay isaorana manokana eto, nanaiky nandray sy nampiantrano ary nanohana ara-pitaovana amin’ny famoahana an’i VIKINA. Eo ihany koa ny fianakaviana sy ny namana izay manohana sy manampy ahy amin’ny fikarakarana rehetra ary ankasitrahako eto ihany koa.
Azo ambara mialoha eto ve ny mety ho fizarazaran'ny fotoana?
Hizara 3 miavaka tsara ny fotoana amin’io faha-12 desambra io; manasa izay rehetra tia ny zavakanto malagasy ho avy fa seho hafa mihitsy no hatolotra ny mpanatrika.
Hisy tokoa ny tanora avy ao amin’ny Faribolana Sandratra hanampy ahy eny an-tsehatra. Ankasitrahako manokana eto izy ireo. Tsy holazaiko eto angamba hoe iza avy izy ireo fa manentana anareo ho avy. Aleo manatrika toa izay hitantarana.
Mpanatrika ireny antsa tononkalo ataon'ny namana Pôeta ireny ve i Hoby hatreto?
Eny, raha azoko atao ka manana fahafahana ara-potoana aho dia manatrika hatrany tokoa ny hetsika misy rehetra. Indraindray anefa manakana izany ny asa sy ny fianarana.
Inona no mety ho tranga tsy fahita hatolotrao amin'io seho io?
Ankoatra ny fampahafantarana sy fiantsana an-tsehatra ny VIKINA dia hisy ihany koa ny fampirantiana ny hosodokon’i Mamy Rajoelisolo, mpanao hosodoko efa fantatry ny maro izay handravaka ny sehatra, ny fitafy malagasin’i Haihaingo izay hampirantiana ihany koa ary ny fahaiza-mamoron’i Ma Randrianalidera ny lamaody malagasy izay entina an-tsehatra.
Mpitendry efa tena matihanina tanteraka mivoy ny mozika tena malagasy no hanao ny feon-kira sy ny hira amin’io dia tsy iza fa i Mbelo sy i Volahasiniaina Linda.
Zavatra tena iainana sy tendrena (live) avokoa no ho hita ao fa tsy hisy ny feon-kira voaomana mialoha na "play back".
Tongava maro fa sady ho finaritra ny maso sy ny sofinao no hahazo ainga vaovao ianao hibanjinana ny ho avy amin’ny fiatrehana ny Vikina mbola hotontosainao.
Mpianatra mpikaroka momba ny Haiolona ianao. Manana famaritana fohy momba izany taranja izany ve ianao?
Taranja nanampy ahy hahafantatra misimisy kokoa momba ny olombelona sy ny toetra amam-pihetsiny ao anatin’ny fiarahamonina ny Haiolona. Ny fahasamihafan’ny tamba-tsoatoavina izay mahatonga ady kanefa voaporofo fa na dia misy ihany aza ireo maningana dia mbola mametraka ho lohalaharana hatrany ny aina malagasy. Tena zava-dehibe amiko izany ary tsy nanenenako ny nanaraka ity lalam-piofanana ity.
Mety ho mifameno amin'ny tononkalo soratanao ve ny fikarohana ataonao?
Misy ny mifameno, mifantoka amin’ny fanelanelanana sy ny fampihavanana ny fikarohana izay ataoko. Tsy mahagaga ary raha toa ka misy amin’ireo tononkalo nosoratako no miantso ny olona hihavana sy tsy hifamaly faty.
Hono ho'aho Hoby, ahoana no nahafantaranao ny Pôetawebs?
Nanao fikarohana momba ny pôeta tato amin'ny aterineto aho ka nifanojo avy hatrany tamin'ny Pôetawebs ary tena nahafaly ahy ny nananaraka ny tapatapakahitra efa nifanaovana tamin'ireo pôeta maro be sy ny fampahafantarana momba ny pôeta, miampy famakafakana samihafa.
Manana hafatra azo atolotra ho an'ny mpiseran'ny Pôetawebs angamba ianao!
Manàna fomba fijery miabo mandrakariva amin’ny fiainana fa hahavitana zava-tsoa ny fahambonian’ny herin-tsaina.
Manasa anao am-pitiavana ho avy ao amin’ny Alliance Française Andavamamba ny alarobia faha-12 desambra amin’ny 2 ora tolakandro, hifanotrona amin’ny famoahana ofisialy ny Vikina.
Mankasitraka indrindra anao Toetra Ràja tamin’ny fanontaniana rehetra ary misaotra ny Pôetawebs sy ny mpanaraka rehetra ihany koa mitondra avo ny fanilon’ny literatiora malagasy.
Lahatsoratra sy rindra : Toetra Ràja
Sary : Hoby Rasolofoarimasy